Tenga Gestodene powder (60282-87-3) hplc≥98% | AASraw
/ Products / Madzimai eHormoni / Gestodene upfu (60282-87-3)
Rating: SKU: 60282-87-3. Category: Madzimai eHormoni
MUTSVENE unobatsira nekugadzira zvigadzirwa kubva kugiramu kusvika kuhutano hweGestodene powder (60282-87-3), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Gestodene powder, Zita revakadzi rinonzi Femoden, Femodene, Femodette, Gynera, Harmonet, Lindynette, Inogona, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle, uye Triadene pamwe nevamwe vakawanda.Gestodene inonzi progestogen hormonal contraceptive. Mishonga ine gestoden inosanganisira Meliane, ine 20 mcg ye ethinylestradiol uye 75 mcg ye gestodene; uye Gynera, iyo ine 30 mcg ye ethinylestradiol uye 75 mcg ye gestodene.
Mazita emakemikari: Gestodene powder
Mazita emagetsi: Mukadzi, Mukadzi, Mukadzikadzi, Gynera, Harmonet, Lindynette, Anoona, Meliane, Millinette, Minesse, Minulet, Mirelle, uye Triadene, nevamwe
Gestodene powder inonyanya kushandiswa neprogestogen, uye inewo ine simba uyerogenic, antimineralocorticoid, uye glucocorticoid. Kubva purogiramu yayo yeprogestogenic, ine antitigonadotropic uye inoshanda antiestrogenic.
Izvo zvinodiwa zveGestodene powder ndeye 87 kusvika 100%. Kusiyana nedzimwe nhepfenyuro dzechizvarwa chechitatu-sedogestrel uye dzisingasviki, Gestodene powder haisi mushonga wehupenyu.Hupenyu hupenyu huri huwandu hwe12 kune maawa 14.
Kubatsirwa kwekutora Gestodene powder (Femoden) kunosanganisira:
iyo ndeimwe yenzira dzakavimbika dzisingatendeseki dzekudzivirira kubata pamuviri kana dzichishandiswa zvakanaka
haina kukanganisa zvepabonde
inowanzoita kuti nguva yako irambe iripo, kujeka uye kunorwadza
iyo inogona kubatsira ne-pre-menstrual zviratidzo.
Gestodene powder (Femodene) haizokudziviriri kurwere hwepabonde, zvakadai seClamydia kana HIV. Makondomu chete anokwanisa kubatsira kuita izvi.
Femodene inofanira kutorwa sezvinorayirwa kudzivirira kubata pamuviri.
Chii chinonzi Destodene powder
Tora Gestodene powder uye ethinylestradiol sezvakataurwa nachiremba wako. Tevera mazano ekunyorwa kwechiraira yako zvakanyatsonaka.
Gestodene powder Uye Ethinylestradiol inorapa chiremba wako anokurudzira ichave yakabva pane zvinotevera (shandisa chero chipi zvacho kana zvose zvinoshanda):
Gestodene powder Uye Ethinylestradiol inowanikwa mune zvinotevera:
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Biphasic Yakawedzerwa Purogiramu Yakazarurwa Terera
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Yakawedzerwa Cycle 30 Mcg-0.15 Mg Oral Tablet
Ethinyl Estradiol-levonorgestrel Dose Dose Biphasic Yakawedzerwa Nheyo Oral Tablet
Ethinyl Estradiol-norelgestromin 20 Mcg-150 Mcg / 24 Hr Transdermal Film, Yakasunungurwa Pakusunungurwa
Kuti Gestodene powder inoshanda sei
Mahwendefa echikadzi imhando yehutachiona hwekudzivirira nhumbu hunowanzo kuzivikanwa sekuti 'piritsi' kana piritsi remubatanidzwa rekudzivirira kubata pamuviri. Mahwendefa echikadzi ane maviri anoshanda zvinoshandiswa, ethinylestradiol uye Gestodene powder. Idzi ndidzo shanduro dzekugadzirwa kweanowanzoitika echikadzi mahormone epabonde, estrogen uye progesterone. Ethinylestradiol inogadzirwa vhezheni yeestrogen uye Gestodene poda ndiyo 'yechitatu chizvarwa' yekugadzira fomu yeprogesterone.
Yakasanganiswa yemumuromo yekudzivirira kubata senge Femodene inoshanda nekukwira-kukwira kwakajairwa kumwedzi. Mune mukadzi anowanzoenda kumwedzi, iwo mahormone ebonde anochinja mumwedzi wega wega. Mahormone anokonzera kuti zai riburitswe kubva mumazai (ovulation) uye gadzirira mutsetse wechibereko kuti uwane nhumbu. Pakupera kwekutenderera kwega kwega, kana zai risina kuberekerwa huwandu hwehomoni hunodonha, zvichikonzera kuti chibereko chedumbu chiteurwe semwedzi wega wega.
Nhamba yezuva rehomoni inotorwa mupiritsi inoshanda zvikuru nekunyengera muviri wako kuti ufunge kuti ovulation yakatoitika. Izvi zvinodzivirira mazai kubva pakuibva uye kusunungurwa kubva kumavhapiti emwedzi mumwe nomumwe.
Mahomoni anowedzerawo kuwanda kwekusviba kwepanyama pamutsipa wechizvaro, izvo zvinoita kuti zvive zvakaoma kuti umumvu uwane kubva mumukadzi kusvika mudumbu uye uwane yai. Vanoshandurawo mararamiro emuviri wechipfu (endometrium), zvichiita kuti zvisave nyore kuti mazai anogadzirwa anogona kuisa ipapo.
Ethinyl Estradiol / Gestodene powder inowira muchina X:
Yakaratidzirwa kuti vakadzi vanotora Ethinyl Estradiol / Gestodene powder panguva yekuzvitakura kungave nevana vane matambudziko. Pane mamiriro ezvinhu apo kubatsirwa kwemishonga kune amai kunowedzera zvinetso zvekukuvadza mwana. Iyi mishonga haifaniri kushandiswa nevakadzi vane pamuviri.
Ko Gestodene powder Iine Matambudziko Api
Iyo migumisiro yeGestodene powder inogona kusanganisira:
Musoro, muviri wt kuchinja, kuora mwoyo / kuchinja mafungiro, kurwadziwa kwepamuviri kana unyoro, kuchinja mu libido. GI kushungurudza kwakafanana neyeusea uye kurwadziwa mumimba.
Nzira yekutenga Gestodene powder kubva kuAASRAW